Hay'adda arrimaha waxbarashada [CSN] waa hay'adda maaraysa taageero-dhaqaaleedka waxbarashada ee dalka Iswiidan, sida taageero-dhaqaaleed iyo daymaha waxbarashada darteed la heli karo. Waxaan kaloo maamulna daymaha kharashka kaarka ruqsadda baabuur-wadista iyo dib u bixinta daymaha qalabaynta guryaha (hemutrustningslån). Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa warbixin dheeraad oo taageerada kala duwan ku saabsan. Warbixinta af-soomaaliga ku qoran waa mid guud.
Dib u bixi deynta qalabaynta guryaha (hemutrustningslån)
Tan iyo bisha diseembar 2021 waxaa arrimaha daymaha qalabaynta guryaha (hemutrustningslån), ee qaxootida degmoouyinka lagu qaabilo, maarayn jirtay Hay'adda arrimaha waxbarashada [CSN]. Laga bilaabo 1 jannayo 2022 suurtagal ma noqon karto codsashada Deynta qalabaynta guryaha (hemutrustningslån), taasoo ah go'aan u baarlamaanka dalka Iswiidan u arrinta ka gaaray.
Laakinse dib u bixinta Deynta qalabaynta guryaha (hemutrustningslån) waxaa, sidii berri hore maarayn doonto Hay'adda arrimaha waxbarashada [CSN]. Taasoo macneheedu ay tahay inaad sidii berri hore dib u bixin doonto daymaha lagugu leeyahay, waa haddii berri hore aad qaadatay Deynta qalabaynta guryaha (hemutrustningslån). Haddii dhibaato ay ka haysato dib u bixinta, waxaa muhim ah inaad noola soo xiriirto oo aan kaddib wadajir xal ugu helno dhibaatada jirta.
Play video: Leysinka gaarigu wuxuu kuu sahlikaraa inaad shaqo hesho.
Playtime: 02:28, Swedish, Somali speech
Kaarka wadista gaadiidka (Leesinka baabuur wadista) – saacidaad wadadii ku gaynaysay shaqo